Yaa Reer Maakhir halkaa gaarsiiyey? | allsanaag
Yaa Reer Maakhir halkaa gaarsiiyey?
Maxaa keenay in Isaaq u dawladeeyo reer Maakhr? Maxaa keenay nin leh Isaaq ayaa reer Abti ii ah sida ina Cabdulaahi Cartan, mid leh waan ka qabaa oo xidid ayaan la ahay sida ina Cali Ayaan iyo Islaan leh Caruur ayaan u dhalay Isaaq sida Islaanta qaylada badanm ay umaddi sharafta iyo karaamada lahayd ay uga ciyaarayaan magacooda oo looga aamusan yahay
Burburkii Qarankii Soomaaliyeed oo ay Soomaali oo dhami qabyaladda isku wada dishay , reer Maakhir iyo Isaaqa maanta u dawladeenayaaba waa ka wada mid ahaayeen dagaaladaas , maanta Soomaaliya kama socdaan ama kama jiraan degaan ama gobol ay Beeli beel kale u dawladaynayso ama ciidan dul kaynayaan oo ay ku khasbayaan inay qaataan Fikirkooda Guracan aan ka ahayn gobolka Sanaag
Beelihii aan hubaysnayn ee deganaa jiinka webiyada Shabeelle iyo Jubba maanta nabad ayeey kula nool yihiin beelihii kale ee Soomaaliyeed, oo aan ka ahayn argagixisada ,
Beelihii wada deganaa Gobolka Mudug nabad ayeey maanta ku wada nool yihiin. Madaxweynaha Galmudug ka taliyaa gaari ayuu ka soo kaxaystaa Mudug oo Nugaal ku yimaadaa. Isagaa oo inta badan dhex maraya beel aan beeshiisii ahayn
Beesha Banaadiri maanta xaafadihii ay ka deganaayeen Muqdisho iyagaa ka taliya, mana jiraan beelo kale oo hubaysan ee duulaan ku ah.
Bulshada Reer Maakhir Soomaalida kale mid ayeey kala wadaagaan ama kala mid yihiin oo ah argagixisada arxanka lahayn oo degaankooda Joogta. Waxaa taa u sii dheer iyaga oo u gaar ah, waxa weli lagu hayaa weerarkii 1991 lagu bilaabay beesha Daarood, oo ay hadda ku hayaan Dirta Waqooyi oo midaysan.
Beesha Isaaq, iyagu Soomaalida labadan waa kaga duwan yihiin. Argagixisada Soomaalii oo dhan xasuuqa ku haysa ma joogaan degaanadooda. Mana jiraan dal iyo beel kale ee Soomaaliyeed oo duulaan ku ah. Waxa intaa u sii dheer Soomaali badan ayaa dhacdooyinka foosha xun oo ay ku hayaan gobolka Sanaag ku kol kooliya oo ugyu hambalyeeya
Waxa keenay maanta in Isaaq u dawladeeyo reer Maakhir waa Saladanaddii Warsangeli oo ku milantay siyaasadda. Maanta boqolkii sideetan siyaasiyiinta Xilalka ka haya Puntland waxa soo magcaabay Suldaan Siciid.
Inta badan Canaasiirta u shaqaysa SNM, iyagana Suldaan Siciid ayaa soo magcaabay. Taasina waxay keentay in bulshaddii kal qaybsanaato oo cadowgii soo jireenka ka ahaa uu ka faaiidaysto. Suldaanka ay maamuladu u arkaan inuu ka mid yahay Shaqaaalahooda.
Maanta labo bilood ayaa ciidan hubaysan dul joogaan Shacabka reer Yube oo aan hubaysnaynan, Suldaan Siciid kama hadlin, sababtoo ah ma doonayo inuu ka caraysiiyo shaqaalihii uu horay ugu qoray maamulkaas SNM.
Shalay Caare oo hubaysan oo ka soo jeeda beesha Habar yoonis ayaa maamulka Puntland u ogolaaday inuu si xor ah ku dhex maro gobolka Sanaag. Suldaanka arinta wax lagama waydiin, isaguna kama hadlin oo ma doonayn inuu ka caraysiiyo shaqaalaha uu u qoray maamulka Puntland.
Ugu danbayntii waxa Allah mahadiis ah in Suldaan Siciid uuna Suldaanka reer Maakhir ahayn waqtigii uu socday dagaaladii SNM Iyo Warsangeli ee gobolka Sanaag , sababtoo ah waqtigaas waxa jirtay beel midaysan oo leh hal Isimi oo dadkiisa iyo dalkiisa jecel Allah ha u naxariistee.
Laga soo bilaabo maalintii Suldaan Siciid loo doortay Suldaanka Warsangeli ilaa maanta midnimaddii reer Maakhir waa sii xumaanaysaa, degaanada qaarkood xoog ayaa lagu haystaa. Suldaan Siciid intii la doortay waa Suldaankii ama Garaadkii ugu horeyey taariikhda Saldanada Maakhir ay ka hoos samaysmeen Suldaan, Garaad, Islaan oo qaarkood maanta doonayaa inay helaan awood tiisa ka sii weyn.
Duulaankii ugu danbeeyey ee SNM iyo kan maanta SNM ku soo qaadeen gobolka Sanaag, Suldaan Siciid wuxuu qabtay oo qura inuu siyaasiyiin kale u magcaabo maamulada Puntland iyo Somaliland. Haddii duulaanka iyo weerarka Maakhir lagu hayaa uu ka bilowmay 1997 markii Suldaan Siciid la doortay, wuxuu dhamaanayaa oo qura maalinta reer Maakhir ay u doortaan isim cusub oo mideeya oo dantooda beel ahaan ka shaqeeya. Isimkaas cod dheer ku sheega in bulshadu iska difacaan Alshabaab iyo Soomaliya diidka . Suldaan Siciid haddii uu maanta aamusin waayey Ini Cali Ayaan , Ina Jibriil Cali Salaad, Ina Xuseen Soomaali iyo Gurey oo si cad u taageeraya SNM, waa adag tahay in Warsangeli intiisa kalena uu Suldaan u sii noqdo
← Wasiirka Waxbarashada Puntland oo gaaray Badhan SNM ALAM-TARA SOO-DHAAFTAY??!! →